SHICHI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
ShiChi Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Chihuahua / Shih Tzu eeyaha isku dhafan oo isku dhafan
Kani waa Maximus, iskutallaab quruxsan, dhaban, 4 jir Shih Tzu / Chihuahua (ShiChi).
ShiChi maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = ShiChi
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Shichi
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Eygan = ShiChi
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Shi Chi
Ellie Mae Shi-Chi eey yar oo 4 bilood jir ah— 'Tani waa gacaliyahayga Ellie Mae McKinney. Waxay ku dhalatay kuna barbaartay gurigeenna Shi-Chi kale, Daisey McKinney. Aabaheed wuxuu ahaa Shih Tzu oo dhiig buuxa oo saaxiibkeen ah. Labada waalidba waxay ahaayeen kuwo timo cad leh, taas oo nagu wareerineysa sida ay u tahay caddaan iyo jilicsan. Ellie waa macaanteena guriga oo xishood badan mararka qaar, laakiin gabi ahaanba jacayl baa ka buuxa markay kula qabsato. '
Lulu Bluebell the Shi Chi oo ah eey markay 5 bilood jir tahay— 'Lulu waa gabadh yar oo macaan oo leh dabeecada ugu fiican qof walbana way jeceshahay. Hooyadeed waa Shih Tzu aabeheedna waa Chihuahua dheer. Waxay jeceshahay inay meel walba la aado qof walbana wuu joojiyaa inuu buuq ku sameeyo iyada maadaama ay aad u qurux badan tahay.
Lulu Bluebell the Shi Chi oo ah eey yar oo 5 bilood jir ah oo fiirineysa daaqada gaariga
'Bonny waa eeygayagii ugu horreeyay, sidaa darteed waxaan ku cusub nahay eeyaha, sidoo kale bisadda Laramie. Bonny waalidkiis waxaa loo dhiibey pound ka dib uur aan qorsheysneyn. Waxaan ku safarnay gaari 11 saacadood ah si aan u aragno oo isla markiiba jacayl ayaannu qaadnay. Bonny waa cunugga dhexe ee 2 walaalo ah, Max iyo Jack. Hooyadeed waa a Chihuahua oo timo dheer leh iyo aabe a Shih Tzu . Waxaan bilawnay inaan tababaro Bonny anagoo adeegsanayna talooyin ka yimid DVD-ga Cesar Millan oo aan iska diiwaan galino kal-fadhiyadiisa khadka tooska ah tani waxay naga caawineysaa inaan banaanka la soo baxno markasta oo aan talo u baahanahay. Thanks to Dog Breed Info Center Waxaan arki karay waxa Bonny u ekaan karto ka hor intaan la korsan. Bonny waalidkiis iyo walaalihiis dib ayaa loo qurxiyay mahadnaqooda 'Pet Rescue Australia'.
ShiChi eyda Darla iyo Butch oo jira 4 bilood jir— 'Waxay leeyihiin indho buluug ah iyo shaqsiyaad waaweyn. Darla waa mid jecel, jalaqsan oo goyn kara Butch (kan cad) ayaa ka weyn oo jecel inuu la legdamo oo la ciyaaro kubbadaha uu ku ciyaaro. '
ShiChi eyda Darla iyo Butch oo jira 6 bilood
sawirrada eey yaryar oo shaybaar lacag ah
Missy, ShiChi oo hal sano jir ah — hooyadeed waxay ahayd mid yar, tan Chihuahua aabaheedna wuxuu ahaa Shih Tzu yar. Missy waa shan rodol oo had iyo jeer waxay umuuqataa inay maalin timo xun leedahay!
'Tani waa Mitzy. Iyadu waa Shichi oo iyadu waa pupper ugu fiican. Ma ciyo. Iyadu waa deggan tahay oo caqli badan tahay oo aad u tababaran.
Sami ShiChi 3 sano jir ah— Iyadu waa eeygii ugu spunkiest ee aan abid lahaa oo waxaan u sabab ah in Chihuahua iyada ku jira. Waxaan lahaan jiray Shih-Tzus waqtiyadii lasoo dhaafay waligoodna shakhsiyaddan-lagu daray !!! '
Ku Aakhiro ShiChi eey yar oo ah 8 toddobaad jir iyo 2 rodol— Waxay ka buuxdaa tamar, waxay jeceshahay fiiro gaar ah waxayna jeceshahay inay ciyaarto.
Eeg tusaalooyin badan oo ShiChi ah
ShiChi Sawirada 1
ShiChi Sawirada 2
muxuu u eg yahay kalluunka ick
i tusi sawirada adhijir Jarmal ah
iskudhafka dachshund ee jack russell